Hafatry ny SL XIX – FJKM
Hafatry ny SYNODA LEHIBE faha-XIX
Sambava 11- 18 Aogositra 2021
“Miorena tsara, aza miova”
Ho amintsika ny fahasoavana sy ny famindrampo ary ny fiadanana avy amin’Andriamanitra Ray sy Jesoa Kristy Zanaky ny Ray amin’ny fahamarinana sy ny fitiavana (II Jao.1.3)
Tontosa soa aman-tsara ny 11- 18 Aogositra 2021 ny Synoda Lehibe faha-19 (SL XIX) natao teto amin’ny Filadelfia FJKM Sambava Afovoany (SP Kristy Fihavanantsika Avaratra Atsinanana (KRIFAA), na dia tao aza ny fotoan-tsarotra namely izao tontolo izao ka nahavoatery nanemorana herintaona izany. Miompana amin’ny teny faneva hoe “miorena tsara, aza miova” (I Kor.15: 58) izany SL XIX izany.
Vita tamin’izao SL XIX izao koa ny fanavaozana ireo Mpiandraikitra Foibe miisa 100 sy ny Biraon’ny Mpiandraikitra Foibe hiasa mandritra ny efa-taona manaraka (2021- 2025). Deraina , isaorana eram-po indrindra ny Tompo Andriamanitra Ray, Zanaka, Fanahy Masina.
Tolorana fisaorana sy fankasitrahana ihany koa ny Filoha sy ny Biraon’ny Mpiandraikitra Foibe, ny Mpiandraikitra Foibe, ny Mpanatanteraka teo aloha, ny Synodamparitany rehetra ary ireo vahiny nasaina. Voaray soa amantsara ireo fanehoana fiombonana rehetra.
Isaorana manokana ny SP KRIFAA 16, ny FJKM Filadelfia Sambava nandray ary ireo Fiangonana manodidina nanaovana ny hetsika mandritra izao SL XIX izao.
Nandritra ity SL XIX ity dia tsapa fa miaro ny Fiangonany ho iray tsy mivaky ny Tompo. Tsapa tokoa ny firedaredan’ny fitiavan’ny rehetra handray anjara amin’ny fampandrosoana ny Fiangonana. Niseho izany na tamin’ireo lahateny tao anatin’ny Fivoriambe, na tamin’ireo famelabelaran-kevitra isan-kariva tany amin’ny FJKM Karmela Antanifotsy azon’ny rehetra natrehina. Samy nanandram-bavaka ny rehetra mba ho izay voafidin’Andriamanitra tokoa no homeny hitondra ny Fiangonana amin’ny efa-taona ho avy.
Miorina tsara ary tsy miova amin’ny maha-Fiangonana nohavaozina azy ny FJKM. Marin-toerana ny rafi-pandaminany. Tsy nisy niova firy ny Foto-Dalàna sy Fitsipika (FDF) afa-tsy ny fidirana ho loholona. Ankoatra izay, ny zavatra vaovao ao dia ny mahakasika ny Fampianarana Teolojika sy ny fanomanana Mpitandrina. Manao lohalaharana ny fampandrosoana ny Asa Misiona ny FJKM mba hampivelatra ny tena, ny ankohonana, ny firenena. Miezaka koa isika hihevitra kokoa ny fahadiovana, ny fikajiana ary ny fanatsarana ny tontolo iainana ka hanatanteraka ny fiangonana maitso. Atao laharam-pahamehana ny fijerena ny maha-olona manontolo. Hamafisina hatrany ny fanaovana Tafika Masina. Atao koa izany ho fiatrehana ny fielezan’ny fivavahana hafa.
Ataon’ny FJKM ho zava-dehibe ny fiainam-pianakaviana. Heverina ny hisiana rafitra mandrindra ny asa mba hahatomombana kokoa ny fitaizana omena ny ankohonana sy ny olom-pirenena, mba hiainana tokoa na maha-olona tan-dalàna sy manara-pitsipika. Tsy mankasitraka velively ny fifofoana sy ny tsy fanajana ny aina ny Fiangonana.
Miara-miezaka amin’ny fiombonana ny FJKM mba havitrika amin’ny fanompoana sy ny fampandrosoana ny asa sosialy. Hahatongavana amin’izany dia ilaina tokoa ny hananana ny fanahin’ny fahafoizana hiatrehana ny fotoan-tsarotra. Manoloana ny fahasahiranana ara-bola dia ampirisihina ny Fiangonana hanana loharanom-bola maharitra sy hampamokatra ny fananany. Tohizana ny ezaka fanoratana ny tany sy fananan’ny Fiangonana amin’ny anarany. Hatao ho fomba fiasa ny fitsirihana (audit systematique) na momba ny rafitra, na momba ny fitantanam-bola na momba ny tetikasa.
Ataon’ny fiangonana loharalaharana ny hahenika ny Sekoly FJKM ireo renivohitry ny SP mipaka hatrany amin’ny fitandremana tsirairay ka ho Sekoly mivelatra, tsara laza, tsara tantana, mamoaka olona resy lahatry ny Filazantsara. Hamafisina hatrany ny fanohanana ny Sekoly FJKM, na amin’ny teti-bola na amin’ny fanohanana ny mpiasa.
Mbola tsy miova ilay vinany mbola haha-firenena kristiana an’i Madagasikara amin’ny taona 2118. Ry vahoaka Kristiana Malala! Manainga antsika rehetra hahatsiaro ho tompon’andraikitra.
Anjaran’ny voafidy eo amin’ny Fiangonana ny hitahiry hatrany ny firaisan’ny Fiangonana tsy ho simba ka hampivelatra ireo fanomezam-pahasoavana ananany. Manana adidy ny Fiangonana handresy ny fahalovana sy ny fahantrana ka miantso ny zanany hijoro amin’ny maha Kristiana marina azy ary manainga azy hirotsaka amin’ny andraikitra tandrify rehetra. Ry zanaky ny Fiangonana tompon’andraikitra ara-panjakana, mijoroa amin’ny fahamarinana ho olona vanona sy vonona! Miorena tsara, aza miova! Ataovy ho vaindohan-draharaha ny ady amin’ny kolikoly sy fijerena ny tsy fandriampahalemana.
Miantso ny mpitondra fanjakana sy ny mpanao politika hitandro toy ny anakandriamaso ny firaisam-pirenena, ka tsy ho ny firehan-kevitra no ho antom-pizarazarana sy hampiady. Manaitra ny fitondram-panjakana hikatsaka bebe kokoa ny tombontsoa iombonana ny Fiangonana. Mila jerena bebe kokoa ny sosialim-bahoaka, ny tsy fandriam-pahalemana, ny fiarovana ny Malagasy izay misy miaina ao anatin’ny kere, ny fiarovana ny taniny mbamin’ny fananany…
Entanina hatrany ny rehetra hivavaka ho an’ny firenena sy ny mpitondra. Mbola mitoetra hatrany eto mantsy ny aretina samihafa. Aoka hatao ho zava-dehibe ny fifampitsinjovana amin’ny fahasahiranana nateraky ny valan’aretina. Dia manao veloma finaritra sy manonona ny fiadanan’ny Tompo Jesoa ho amin’ny rehetra. Mirary soa hatrany fa ny fiainantsika dia eo ambany fitantanan’Andriamanitra Ray, Zanaka, Fanahy Masina.
“Endrey ny halalin’ny haren’Andriamanitra sy ny fahendreny ary ny fahalalany, ny fitsarany tsy hita lany ary ny lalany tsy azo fantarina! (…) Izy anie no homem-boninahitra mandrakizay. Amena ! (Rom.11.33- 36)
Amin’ny anaran’ny SL XIX
Sambava, 18 Aogositra 2021
Filohan’ny Synoda Lehibe XIX
RABEVITA Saina, Mpitandrina
Filohan’ny Biraon’ny Mpiandraikitra Foibe